I-Weekly Pivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex (MT5) I-Weekly Pivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
I-Weekly Pivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Ephreli 9, 2021
IPivot Point ingelinye lamathuluzi asetshenziswa ngabadayisi abangochwepheshe ukuthola amathuba okuhweba angaba khona. Kungaba yisipiliyoni esihle sokufunda kubadayisi abathengisayo ukuthi bafunde ukuhweba ngokuya ngamazinga ePivot Point.
Kunezindlela eziningi zokuhweba ngokususelwa emazingeni ePivot Point. Lelisu liveza nje enye yezindlela eziningi zokuyidayisa ngokususelwa ethubeni lokuhweba eliguqukayo.
1 pivot Amaphuzu
4.3 Ungayifaka kanjani i-Weekly Pivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5?
I-Pivot Point Indicator iyithuluzi lokuhlaziya lobuchwepheshe elisetshenziselwa ukunquma inkomba yonkana yokuthambekela noma ukuchema emakethe kanye namazinga ahlukahlukene wokusekela nokumelana ngokuya ngamazinga entengo abalulekile enkathi edlule. Ngokwesibonelo, iphoyinti le-pivot lansuku zonke libalwa ngokususelwa kumazinga entengo osuku lwangaphambilini, ngenkathi iphoyinti le-pivot lamasonto onke libalwa ngokususelwa kumazinga entengo angukhiye weviki eledlule, njalonjalo njalonjalo.
Isikhombi sePivot Point ngokujwayelekile sihlela iPivot Point enkulu (PP), Amazinga amathathu okusekela (S1, S2, kanye ne-S3), namazinga amathathu wokumelana (R1, R2, kanye no-R3). Okunye ukuhluka kubalwa ngamazinga amane okusekela nokumelana, kanti ezinye zikhawulelwe ezimbili kuphela. Le nguqulo yamaPivot Points asetshenziswe kuleli qhinga ifaka imigqa emithathu yokusekela nokumelana ngamunye.
IPivot Point eyinhloko (PP) ibalwa njengesilinganiso esiphakeme, ongaphakeme, kanye nokuvalwa kwesikhathi esedlule. Amazinga ahlukahlukene wokusekelwa nokumelana anamafomula ahlukahlukene atholakala kulayini omkhulu wePivot Point. Ngezansi kunamafomula ahlukahlukene wamazinga wokusekelwa nokumelana.
PP = (High + Low + Vala) / 3
R1 = (I-PP x 2) – Low
S1 = (I-PP x 2) – High
Qaphela ukuthi i- “Phezulu” isho ukuphakama okuphezulu kakhulu kwesikhathi esedlule, kanti okuthi “Okuphansi” kubhekiswe kuphansi eliphansi kunawo wonke esikhathini esedlule. Esikhathini sePivot Point yamaviki onke, lokho kungaba izinga eliphakeme kakhulu neliphansi kakhulu esontweni eledlule.
Ukuqondiswa kwethrendi enkulu noma ukuchema kuvame ukususelwa lapho isenzo samanani sihlobene nolayini omkhulu wePivot Point.
Noma kunjalo, isenzo sentengo esivela kude sivela kulayini omkhulu wePivot Point, kuphakamisa amathuba okuthi intengo izobuyela emuva encazelweni yayo, okuwumugqa omkhulu wePivot Point, ngisho nokujikela ekugcineni okuphambene nobubanzi.
Njengoba igama liphakamisa, amazinga okusekela (S1, S2, kanye ne-S3) ingasebenza njengamazinga wokusekelwa lapho intengo ingahle isuke khona. Ngokwesinye isandla, amazinga wokumelana (R1, R2, kanye no-R3) ingasebenza futhi njengamazinga wokumelana lapho amasignali e-bearish aguqukayo angavela. Noma kunjalo, lawa mazinga nawo angagqekezwa ngomfutho oqinile phakathi kwezimo zokuqhuma okukhulu.
I Isihlobo Amandla Inkomba (I-RSI) i-oscillator yomfutho eguquguqukayo evame ukusetshenziselwa ukunquma izimakethe ezithengwa kakhulu nezithengiswa kakhulu, kanye nezimpawu zayo zokubuyiselwa emuva ezalandela. Ngezikhathi, Ingasetshenziswa futhi ukunquma izimakethe ezihamba phambili kanye nesiqondiso salo sethrendi, kanye nokuphuma komfutho okungahle kwenzeke.
I-RSI ihlela umugqa oshova phakathi kwebanga likaziro kuye 100. Lo mugqa utholakala ekuhambeni kwesenzo sentengo. Kanjalo, umugqa uhlela futhi ulingisa ukunyakaza kwesenzo sentengo futhi ubonakala umangele kakhulu ngenxa yokwehla okungazelelwe kwentengo.
Ububanzi be-RSI ngokuvamile bunezimpawu emazingeni 30 futhi 70, ezisetshenziselwa ukunquma izimakethe ezithengwa kakhulu nezithengwa ngokweqile. Umugqa we-RSI ongezansi 30 kuyinkomba yemakethe ethe xaxa, ngenkathi ulayini we-RSI ongenhla 70 kuyinkomba yemakethe ethengwe ngokweqile. Zombili lezi zimo ziyizimo eziphambili zokuhlehliswa kokusho okungenzeka kube khona.
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-RSI nayo ingasetshenziselwa ukunquma ukuthambekela namandla. Noma kunjalo, ngenhloso yaleli su, ngeke singene kulezi zindlela okwamanje.
Lelisu kuyisu elisho ukubuyisela emuva okuhweba lapho kuhlangana khona ukuhlehliswa kusuka ekusekelweni kwePivot Point kweViki noma ezingeni lokumelana kanye nesiginali yokubuyiselwa emuva esivela ku-RSI.
Okokuqala, kuzofanele sibeke inkomba yePivot Point ukukhomba amazinga ePivot Point Wamasonto Onke. Lokhu kungashintshwa ngaphakathi kwethebhu yokufaka yezilungiselelo zesikhombi.
Bese, sizobe sidayisa leli qhinga eshadini lehora eli-1. Izikhathi ezibekiwe ezifana neshadi lemizuzu engama-30 namahora amane nazo zingasebenza kahle.
Ngemuva kwalokho sibheka isenzo samanani njengoba sisondela ezingeni leNkxaso noma Lokumelana ngokususelwa kumaPivot Points Wamasonto onke.
Ngesikhathi esifanayo, kufanele futhi siqinisekise ukuthi i-RSI ithengwe ngokweqile noma yengezwe ngokweqile.
Uma kunjalo, bese singathengisa ukusethwa okuguqukayo okususelwa ekuhlanganeni kwesenzo sentengo nomugqa we-RSI ogoqeka emuva ngaphakathi 30 uku 70 uhla.
Intengo kufanele ithinte ileveli yokusekelwa kwePivot Point yamaviki onke (S1, S2, noma i-S3).
Ulayini we-RSI kufanele ube ngezansi 30.
Isenzo sentengo kufanele sikhombise izimpawu zokuguqulwa okuguqukayo.
Ulayini we-RSI kufanele wephule emuva ngenhla 30.
Vula i-oda lokuthenga ekuhlanganeni kwalezi zimpawu eziguqukayo.
Setha inzuzo yokuthatha ezingeni elilandelayo le-Weekly Pivot Point ngaphezu kwekhandlela lokungena.
Intengo kufanele ithinte ileveli yeviki lePivot Point Resistance (R1, R2, noma u-R3).
Ulayini we-RSI kufanele ube ngenhla 70.
Isenzo sentengo kufanele sikhombise izimpawu zokubuyiselwa emuva kwe-bearish.
Ulayini we-RSI kufanele ubuyele emuva ngezansi 70.
Vula i-oda lokuthengisa lapho kuhlangana khona lezi zimpawu ezisho ukuguqulwa.
Setha inzuzo yokuthatha ezingeni elilandelayo le-Weekly Pivot Point ngezansi kwekhandlela lokungena.
Lelisu lokuhweba lingaba isu elisebenzayo lokuguqula izindlela. Empeleni, kukhona abathengisi abaningi abanesikhathi eside abathengisa amasignali wokuguqula athuthuka emazingeni okusekela kwePivot Point kanye namazinga okumelana nawo. Ukuhweba kusho ukuguqulwa okuvela ekukhuphukeni kwentengo okususelwa ku-RSI futhi kuyisu lokuhweba elivumelekile, ikakhulukazi lapho kuthengiswa ngokuhlangana nesenzo sentengo nezinye izinkomba zobuchwepheshe. Lelisu limane lidayise ngokuhlangana kwalezi zindlela.
Ukusetha ukuhweba kusetshenziswa leli qhinga akuveli kaningi. Noma kunjalo, banikela ngamathuba wokuhweba asebenzayo anamandla okukhiqiza isivuno esikhulu maqondana nobungozi noma nini lapho bekhula.
Isu leviki lentengo le-Spike Reversal Forex Trading Strategy le-MT5 liyinhlanganisela yeMetatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Isu le-Pivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy le-MT5 linikeza ithuba lokuthola izici ezihlukile namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani i-Weekly Pivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5?
Landa Isu Lamaviki Wepivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy yeMT5.zip
Iya kwesokudla ukukhetha iSonto ngalinye lePivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Uzobona iSonto ngalinye lePivot Price Spike Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 liyatholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleKeltner Channel TTF Forex Ukuhweba Isu
Isihloko esilandelayoI-Zigzag MACD Candle Divergence Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5